Nasrullaah oo banaanka soo dhigay cida ka danbeysay Iscasilaadii Sacad Xariiri - Caasimada Online
Home Warar Nasrullaah oo banaanka soo dhigay cida ka danbeysay Iscasilaadii Sacad Xariiri
Nasrullaah oo banaanka soo dhigay cida ka danbeysay Iscasilaadii Sacad Xariiri
Muqdisho (Caasimada Online) – Hoggaamiyaha ururka Xisbullaah Xasaan Nasrullaah oo hadlay ayaa boqortooyada Sucuudiga ku eedeeyay in ay ku qasabtay Ra’isulwasaarihii Lubnaan Sacad Xariiri in uu is casilo.
“Ma ahayn go’aankiisa, iyo rabitaankiisa, waa mid lagu qasbay” ayuu yiri Xasan Nasrullaah oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu awoodda badan ee Lubnaan, islamarkaasna madax ka ah ururka hubeysan ee Xisbullaah, ee shiicada ah.
Wuxuu ku baaqay in degenaan laga dhaliyo dalka Lubnaan, isaga oo sidoo kale su’aal ka keenay in Xariiri uu kusoo laaban doono Lubnaan iyo in kale.
Jeneraal Cabbaas Ibraahim oo madax ka ah hay’adda nabad suggida Lubnaan ayaa sidoo kale sheegay in uusan haynin wax xog ah oo ku saabsan in Xariiri la qorshaynayay in la dilo.
Wasiirka arrimaha khaliijka ee Sucuudiga Tamar A-Sabhaan ayaa sheegay illaalada Xariiri ay xaqiijiyeen in uu jiray qorshe lagu dilayo Ra’isulwasaaraha, waxase dhanka kale uu beeniyay in Sucuudiga ku cadaadiyeen in uu is casilo.
Xariiri ayaa saddex jeer Ra’isulwasaare usoo noqday, markii ugu dambaysay waxa uu xilkan qabtay sanadkii 2016-kii.